Galmudug oo soo dhaweysay Xilka qaadita Gudoonka Barlamaanka Galmudug iyo Madaxweyne ku- xigeenka Maamulkaasi – Balcad.com Teyteyleey
Galmudug oo soo dhaweysay Xilka qaadita Gudoonka Barlamaanka Galmudug iyo Madaxweyne ku- xigeenka Maamulkaasi
By Abdi Malik	 On Oct 1, 2017
Warsaxaafadeed ka soo baxay Xafiiska maamulka Galmudu ayaa lagu sheegay in lagu soo dhaweynaayo xil ka qaadista Gudoonka Barlamaanka Galmudug iyo Madaxweyne ku- xigeenka Maamulkaasi, hadaba warsaxaafadeedkaasi oo sidiisa u qornaa waa kanaa:
Dowlad Goboleedka Galmudug waxay aad iyo aad u soo dhaweyneysaa go’aanka ay qaateen xildhibaanada Galmudug oo ay xilka kaga qaadeen Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir iyo Madaxweyne Ku-xigeenkii hore Maxamed Xaashi Cabdi, ka dib markii ay ku kaceen qiyaano ka dhan ah jiritaanka Galmudug ee ah Inqilaabka dhicisoobay.
Xil kaqaadista labada masuul ayaa ahayd mid u dhacday sidan, kadib markii ay soo xaadireen hoolka shirarka Baarlamaanka Galmudug 52 xildhibaan, iyadoo uu shir gudoominayo Gudoomiye Ku-xigeenka 1aad ee Baarlamaanka:
1. Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa xilka looga qaaday tira buuxda 52 cod.
2. Madaxweyne Ku-xigeenkii hore ee Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa xilka looga qaaday 49 cod, laba ayaa ka aamustay halna waa diiday.
Sidaas ayuuna Gudoomiye Ku-xigeenka 1aad uu ku ansixiyey in labada masuul xilka looga qaaday.
Dowlad Goboleedka Galmudug waxay aad iyo aad ugu dadaalaysaa inay dhameystirto dadaaladii ay ugu jirtay dib u heshiisiinta Ahlu Sunna Waljamaaca si looga qeyb galiyo Dowlad Goboleedka Galmudug ugana qeyb qaataan dhismaha iyo wajiga cusub ee ay yeelaneyso Galmudug, iyadoo laqaban doono shir ballaaran oo ay isugu yimaadaan salaadiinta iyo cuqaashii dhisatay Galmudug.
Dowlad Goboleedka Galmudug waxay ugu baaqeysaa dadka ree Galmudug inay u istaagaan ka qeyb qaadashada hawlaha lagu sugayo amniga iyo xasilinta deegaanada, iskana ilaaliyaan in cadowga ree Galmudug uu kusoo dhex dhuunto.
Dowlad Goboleedka Galmudug waxay aad iyo aad ugu mahad celineysaa xildhibaanada sharafta leh ee u istaagay inay bad baadiyaan Dowladdooda, had iyo goorna u taagan fashilinta iyo ka hortagga cadowga ree Galmudug, xaqiijiyeyna in Galmudug aysan ahayn meel cadowgu si fudud uga sameyn karin waxuu doono.
Sidoo kale Dowlad Goboleedka Galmudug waxay aad iyo aad ugu mahad celineysaa Dowlad Goboleedyada had iyo goor u taagan ilaalinta iyo jiritaanka Galmudug, waxaana usoo jeedineynaa Xukuumadda Federaalka in ay joojiso faragalinta qaawan ee ay ku hayso Galmudug iyo dowlad goboleedyada kale, isla markaana hoos u eegto dareenka ay muujinayaan dowlad goboleedyadu maadaama ay matalaan shacabka dowladda federaalkuna ka rumayso in ay tahay dowladdii shacabka.
Dowlad Goboleedka Galmudug waxaan ugu baaqeynaa beesha caalamka in ay si qoto dheer isha ugu hayaan faragalinta qaawan ee ay Xukuumadda Federaalku ku hayso Galmudug kana bixiyaan jawaabta ku haboon, sidoo kale waxaan ugu baaqeynaa beesha caalamka in ay taageero iyo daryeel lasoo gaaraan dadka dhibaateysan ee abaaruhu saameeyeen.
The post Galmudug oo soo dhaweysay Xilka qaadita Gudoonka Barlamaanka Galmudug iyo Madaxweyne ku- xigeenka Maamulkaasi appeared first on Ilwareed Online.
Howlgallo dad lagu soo qabtay oo xalay laga fuliyay degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag